के हो हाइपोमेनिया
हाइपोमेनिया मुड, मन र व्यवहार अस्थिर हुने एक किसिमको मानसिक रोग हो । अर्थात् मेनिया र हाइपोमेनिया बाइपोलर डिसअर्डरका चरण हुन् । हाइपोमेनिया यस्तो रोग हो, जसमा मानिसको मन अस्थिर रहन्छ र बढी बोलिरहनुपर्ने हुन्छ । यसमा मुख्यतः व्यक्ति कुनै पनि विषयमा प्रभावित भइहाल्ने हुन्छन् ।
आफ्ना कुरामा जिद्धी गर्ने र भनेको नमान्ने, अपशब्द बोल्ने, सानो कुरामा बढी रिसाउने, मन चञ्चल रहने हुन्छ । सामान्यतः यो रोग लागेको ठम्याउन गाह्रो पर्दछ । तसर्थ, वेलैमा यो रोग पहिचान गर्न सकिँदैन र कतिपय मानिस वर्षौंसम्म पीडित भएर बाँच्न विवश हुन्छन् । मनोविद् डा. करुणा कुँवरका अनुसार सामान्यतया मानिसको मन खुसी हुने कुरामा खुसी र दुःखी हुने कुरामा दुःखी हुनुपर्ने हो, तर चाहिनेभन्दा अत्यधिक खुसी वा दुःखी हुन थाल्नु हाइपोमेनियाको मुख्य लक्षण हो ।
घमण्डी बन्ने, बढी फुर्ती लगाएर कुरा गर्ने ।
मिठो खानेकुरा र राम्रो लगाउन माग गर्ने ।
असम्भव कुरालाई पनि गर्न
सक्छु भन्ने ।
यौनमा बढी रुचि राख्ने ।
राति १–२ घन्टा सुते पनि निद्रा पुग्ने
नचाहिने कुरामा पनि पैसा खर्च गर्ने ।
बढी आत्मविश्वासी हुने ।
छटपटी हुने अर्थात् एउटा काम नसक्दै अर्को काममा मन जाने ।
हाइपोमेनियाका समस्या सुरुसुरुमा कम मात्रामा देखिन्छ र पहिचान गर्न सकिँदैन । जुन मेनियाका लक्षणहरू हुन् । कतिपय अवस्थामा मेनिया आफैँ पनि निको हुन्छ । तर, एकपटक मेनिया भएको बिरामीमा अर्कोपटक रोग दोहोरिने समस्या ८० प्रतिशत रहन्छ । यसरी दोहोरिएको अवस्थालाई बायोपोलार एफेक्टिभ डिसअर्डर भनिन्छ । कहिले मेनियामा डिप्रेसिभ सिस्टम देखिन्छ । यो कहिले ६ महिनामा त कहिले ३–४ वर्षमा दोहोरिने गर्दछ । सामान्यतया मानिसमा हाइपोमेनिया १४ देखि १९ वर्षमा सुरु हुन्छ र ४० वर्षपछि कम हुँदै जान्छ ।
नेपालमा यस्तो रोगका बारेमा खासै तथ्यांक संकलन नभएकाले कतिजना यो रोगबाट पीडित छन् भन्ने यकिन तथ्यांक छैन । तर, मानसिक स्वास्थ्य विभागका अनुसार नेपालमा हाइपोमेनियाका करिब डेढ लाख बिरामी छन् ।
पैसा बाँड्ने, कुरा बढाइचढाइ बोल्ने, राति थोरै समय मात्र सुत्ने, गीत गाउने, रातो–पहेँलो रंगीन लुगा लगाउन रुचाउने र यौन उत्तेजना बढी देखिने हुनाले विशेषगरी दम्पतीहरू यस रोगबाट बढी पीडित हुने गर्दछन् ।
हाइपोमेनियाका कारण दम्पतीबीचमा चर्को विवादको स्थिति पैदा हुन्छ ।
सामान्यतया हाइपोमेनिया किशोरावस्थामा देखा पर्ने भएकाले आमाबाबु वा आफन्तले अटेरी भएको संज्ञा दिने, व्यवहार परिवर्तन गर्न मात्र दबाब दिने र बिरामीलाई मानसिक दबाब पर्ने भएकाले यो समस्या बढी बल्झिने हुन्छ ।
किशोरहरूमा ड्रग्सको प्रयोगले यस्तो भएको हो कि भन्ने गलत बुझाइका कारण यस रोगबारे गलत धारणा बन्छ । परिवारमा हुने मानसिक दबाब र अस्पतालमा ल्याइसकेपछि पनि हाइपोमेनिया भएकोबारे सजिलै नपत्याउने भएकाले उपचारमा ढिलाइ हुने गर्दछ ।
आफूलाई हाइपोमेनिया भएको बिरामी आफैँले नमान्ने, जिद्दी गर्ने भएकाले घरपरिवारसँगको सम्बन्ध बिग्रिँदै जाने र मानसिक दबाबका कारण बिरामीलाई बायोपोलार डिसअर्डर हुुने अधिक सम्भावना रहन्छ ।
संगत मात्रै होइन आमाबुबाको गलत व्यवहारले पनि बिग्रन्छन् बच्चा
सर्वगुणकारी फल मेवा, यी रोगहरु पार्छ चैट्
अनुहारको दागधब्बा हटाउन लाभदायी फिटकिरी
बढी पसिनाले धड्कन बढ्छ
गेडागुडी खाँदा यस्ता फाइदा
प्राणघातक हेपाटाइटिस बीः कसलाई, किन लाग्छ ?
अनिद्राले निम्त्याउने रोग
किन विथोलिन्छ निद्रा ? के भन्छ रिसर्च ?
बालबालिकालाई यौन दुव्र्यवहारबाट जोगाउन
कुन दाल किन खाने ? यस्तो छ फरक दालको फरक उपयोगिता